रुसमा परीक्षण गरिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपले काम गर्ने देखियो, साइड इफेक्ट के छ ? Canada Nepal
रुसमा परीक्षण गरिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपले काम गर्ने देखियो, साइड इफेक्ट के छ ?
बीबीसी - रुसी वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षणबाट मानिसमा भाइरसविरुद्ध लड्ने प्रणालीको विकास भएको जनाएका छन्। खोपको परीक्षणबारे पहिलो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै उनीहरूले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्।
विज्ञहरूले खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्नको उक्त परीक्षण निकै न्यून भएको बताएका छन्। तर मस्कोले आलोचकहरूलाई जवाफ दिँदै परिणामको प्रशंसा गरेको छ।
सहभागीको उमेर १८ देखि ६० वर्षसम्म थियो। उनीहरूलाई ४२ दिनसम्म निगरानी गरिएको थियो र सबैमा तीन साताभित्र एन्टीबडीको विकास भएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न दीर्घकालीन सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापित गर्न मनोवैज्ञानिक लाभको तुलना सहितको ठूलो दीर्घकालीन परीक्षण र थप निगरानी आवश्यक छ।"
जर्नलका अनुसार तेस्रो चरणको परीक्षणमा 'फरक-फरक उमेर र जोखिम समूह' बाट ४०,००० स्वयम्‌सेवक सहभागी हुनेछन्।
भाद्र २०, २०७७ शनिवार १६:५१:३७ बजे : प्रकाशित